Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Egypt » Egypt mara ọkwa mgbochi ọhụrụ nke COVID-19
Egypt machibidoro nnọkọ oriri na ọ storesụ ,ụ, belata ụlọ ahịa na ụlọ nri ruo awa ole iji belata mgbasa nke coronavirus
Agha Cairo na-apụta ọzọ coronavirus
A machibidoro nnukwu nnọkọ na egwu karịrị izu abụọ
Shopslọ ahịa niile, ụlọ ahịa, ụlọ nri, ụlọ nri, ebe a na-eme ihe nkiri na ebe nkiri ga-emechi n'oge
Na-ekwu okwu na nnọkọ ogbako taa, EgyptPrime Minister Mostafa Madbouly kwuru na gọọmentị mba ahụ emeela mkpebi dị mkpa iji mesoo coronavirus na-abịaghachi mgbe ezumike nke Eid al-Fitr na-eru nso.
Mịnịsta Ala ahụ kwupụtara na a ga-ewepụta usoro iwu ọhụrụ na mgbochi COVID-19 ọ ga-adịgide ruo izu abụọ iji gbochie mgbasa coronavirus n'oge ụbọchị ikpeazụ nke Ramadan na ememme Eid.
"Site na echi, Mee 6 ruo May 21, anyị ga-emechi ụlọ ahịa niile, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ebe a na-ere nri, ebe a na-ere ihe nkiri, ebe a na-ere sinima na ebe ihe nkiri na elekere itoolu nke mgbede iji belata ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-agba na ebe ndị a," Madbouly kwuru
A ga-amachibido nnukwu nnọkọ na ebe nkiri na oge, yana osimiri na ogige ntụrụndụ mechiri n'etiti May 12 na 16, Madbouly kwuru. Ememe Eid, nke a ga-eme na May 12 na 13, afọ a dabara n'etiti etiti gọọmentị izu abụọ nke mmachi.
“N'otu oge ahụ, a ga-ahapụ ọrụ nnyefe ụlọ home mana n'ime izu abụọ na-abịa, a ga-amachibido nzukọ ọ bụla, nzukọ, ihe omume, ma ọ bụ mmemme mmemme ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ọ bụla,” ka PM ahụ kwukwara.
Mkpebi gọọmentị na-abịa ka COVID-19 malitere ịgbasa ọzọ n’Ijipt, na egwu egwu nke otu n’ime ụbọchị kachasị mkpa na kalenda Alakụba na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ.